ပြည်ပသို့ သစ်တောထွက် ပစ္စည်းတင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ ၁ဝ ခုခန့်ကို မမှန်မကန် ပြုလုပ်မှုကြောင့် သစ်ေ? - Yangon Media Group
ပြည်ပသို့ သစ်တောထွက် ပစ္စည်းတင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ ၁ဝ ခုခန့်ကို မမှန်မကန် ပြုလုပ်မှုကြောင့် သစ်ေ?
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂
ယခုနှစ်တွင် သစ်တောထွက်ပစ္စည်း ပြည်ပပို့ကုမ္ပဏီ၁ဝခုခန့်ကို မမှန်မကန်ပြု လုပ်မှုကြောင့် သတိပေးထားကြောင်း သစ်တောဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတင့်ခိုင်က ပြောသည်။ အောက်တိုဘာ ၂ရက်က ရန်ကုန်မြို့ IBC တွင် မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက ဦးစီး ပြုလုပ်သည့် စက်မှုသစ်ကုန်ကြမ်းရရှိရေး၊ တရားဝင်သစ်တောထွက် ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်၊ အခွန်နှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်များတွင်တွေ့ကြုံနေရသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် တွေ့ဆုံရှင်းလင်းဆွေး နွေးပွဲအခမ်းအနား ရပ်နားချိန်တွင် သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ မေး မြန်းချက်အပေါ် အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးတင့်ခိုင်က ”တချို့ကုမ္ပဏီ တွေက စာရွက်စာတမ်းမှာလည်းပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိတာပေါ့။ လက်မှတ်အတုနဲ့ လျှောက်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တွေတောင်ပါပါတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းတွေ ဖြေလျော့ပေးထားပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ရမလားလို့စမ်းကြည့်တာပေါ့။ မရတဲ့အခါကျတော့ ပုံစံအမှန်နဲ့ပဲလာပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ဘက်က မြန်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်းမှန်အောင်လုပ် ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ သတိပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီ ဆယ်ခုလောက်ရှိပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အထက်ကို တင်ပြထားပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ သစ်တောဦးစီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံပို့ကုန်တိုးတက်ပြီး နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတိုးတက်စေရန်အတွက် သစ် တောဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖြေလျှော့ပေးနိုင်သည့်အပိုင်းများကို စတင်ဖြေလျှော့ ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးတင့်ခိုင်က ”သစ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်များကို Request လုပ်ချင်ပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့ ပြည်ပပို့သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများ စိစစ်ထောက်ခံရေးအဖွဲ့ အနေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကိုအကောင်းဆုံး Service ပေးနေပါတယ်။ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဒီနေ့တင်ပြရင် မနက်ဖြန်ရပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တင်ပြတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ ပြည့်စုံမှန်ကန်ဖို့ရှိအောင် ကုမ္ပဏီများဘက်ကနေ ကူညီပေးပါ။ နှစ်အချက်အနေနဲ့ တင်ပြတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ ကျွန်တော်တို့မြေ ပြင်ကိုသွားစစ်တဲ့အခါမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြပါ။ မှန်မှန်ကန်ကန် လျှောက်ထားပေးပါ။ စိစစ်တဲ့အခါမှာမမှန်မကန်လျှောက်ထားတဲ့ကုမ္ပ ဏီအချို့ရှိပါတယ်။ အချို့ဆိုနာမည် ကြီးကုမ္ပဏီတွေတောင်ပါပါတယ်”ဟု တရားဝင်သစ်နှင့်သစ်တောထွက် ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက် ပေးခြင်းနှင့် ပြည်ပတင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတင်ပြချက်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်တွင်လည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ မမှန်မကန်ပြုလုပ် သည့်ကုမ္ပဏီများကို ပထမအကြိမ် အနေဖြင့် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းထားပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားပါက Black -List သွင်းသည်အထိ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတကာ သံအမတ် ၅ဝ ကျော် မောင်တောနှင့် ရသေ့တောင်ဒေသသို့ နေ့ချင်းပြန် သွားရောက်လေ့လာ
မဲပေးသူများကို အင်အားသုံး တားဆီးခဲ့ခြင်းအတွက် ဂွါဒီယိုလာ ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်
မော်လမြိုင်မြို့ရှိ ပထမနှစ်ခြင်း အသင်းတော့် ပြုပြင်မှုလုပ်ငန်း ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ပြန်လ?
အဂတိ လိုက်စားမှုဖြင့် ထောင် ၁ဝ နှစ်ကျခံရန် အမိန့်ချမှတ်ထားခြင်း ခံရပြီးသော ပါကစ္စတန် ဝန်ကြီး?
(၆၃)နှစ်မြောက် ကရင်ပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနား၊ အထိမ်းအမှတ်ပြခန်းများနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ မုခ်ဥ?
မြန်မာ့အကျပ်အတည်း၏ ထွက်ပေါက်သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ခြင်းသာဖြစ်
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ အလုပ်သဘေ